Mikasa Hametra Ny Fidirana Amin’ny Aterineto Ho An’ny Mpiasam-panjakana i Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2016 6:25 GMT
Solosaina tombanana ho 100.000 eo ho eo ao amin'ny biraom-panjakana ao Singapaoro no hiharan'ny tolo-kevitra ‘fanasarahana ny fampiasana aterineto.’ Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Fahefana Fampivelarana Infocomm an'ny Fanjakana
Amin'ny volana hoavy, hanomboka fomba somary vaovao hanatsarana ny fiarovana ny fiseraserana amin'ny aterineto ao amin'ny biraom-panjakana i Singapaoro. Raha tokony hametraka rafitra fiarovana na hiaro tsara kokoa ny foto-drafitrasa, mikasa hametra fotsiny ny fidirana amin'ny aterineto ao amin'ny biraom-panjakana ny governemanta. Ny drafitra, izay antsoina hoe “Tetikasa Fanasarahana ny Fiseraserasera Amin'ny Aterineto Eo amin'ny Sampan-draharaham-panjakana’, dia ho ampiharina feno alohan'ny volana Jona 2017.
Nilaza ny Infocomm Development Authority (IDA) an'ny fanjakana fa solosaina 100.000 ampiasaina amin'ny sampan-draharaham-panjakana no hiharan’ ilay antsoin'ny olona sasany hoe “fandraràna ny aterineto”. Maro ireo Singapaoreana naneho ny ahiahiny mikasika ny ilàna ilay soso-kevitra. Matahotra izy ireo fa hanohintohina ny fandaharan'asam-panjakana Smart Nation (Firenena Maranitra) izay mikatsaka hanatsara ny fifandraisana amin'ny aterineto ao amin'ny firenena izany.
Nanazava ny governemanta fa hapetraka ao amin'ny birao ny “fiantsonana” amin'ny aterineto raha mila miditra tranonkala ny mpiasam-panjakana.
Avela hamindra ireo asa amin'ny mailaka tsy voalahatra mankao amin'ny kaontin'izy ireo manokana ihany koa ny mpiasam-panjakana. Tsy voakasiky ny fandraràna ny aterineto ny sekoly.
Tamin'ny herintaona, nanara-maso trangam-panafihana antserasera miisa 16 natao amin'ny tambajotram-panjakana ny IDA.
Araka ny isa: Fandrahonana sy fanahiana antserasera mivantana amin”ny fanjakana Aziatika Atsimo Atsinanana
Manizingizina ny praiminisitra Lee Hsien Loong fa “tsy maintsy natao” ilay tolo-kevitra fandraràna ny aterineto. ‘Mba hanasongadinana ny maha-maika ny toe-javatra, izy no mpiasam-panjakana voalohany nanasaraka ny asany amin'ny solosaina amin'ny aterineto. Nandrisika ny vahoaka izy mba hahatakatra ny tena fototra ijoroan'ny soso-kevitra:
Efa lasa miantehitra tanteraka amin'ny rafitra teknolojiam-baovao isika … ary mila mahazo antoka isika fa voaaro ny rafitra”. Tsy azo sivanina isika, tsy azo angalarina ny tahiry, tsy misy olona afaka miditra sy hamafa ny tahirintsika na mahatonga zava-dratsy hafa.
Tonga tamin'izany hevitra izany izahay, nanapa-kevitra hanao izany izahay. Faly ve isika? Tsy mino aho satria hampitaredretra antsika amin'ny resaka famokaraka isan'andro isan'andro izany. Saingy eo amin'ny lafiny filaminana, ny fiarovana ny rafitra antsika, ny fiarovana ny olom-pirenentsika sy ny torohay fampahafantarana azy ireo, dia tsy maintsy natao izany.
Mba hiantohana ny fiarovana ny foto-drafitran'ny teknolojiam-baovaon'ny governemanta, misy ny filàna firotsahana an-tsehatra matanjaka eo amin'ny fiarovana. Saingy misy ireo mpiserasera sasany mahita ny tolo-kevitra fandraràna ny aterineto ho henjana, tsy ilaina sy tsy voahevitra.
Hotapahana ny aterineto amin'ny solosain'ireo mpiasam-panjakana amin'ny taona hoavy. Satria Smart Nation (Firenena Marani-tsaina) isika.
Mampatsiahy ny governemanta ilay bilaogera momba ny teknolojia Dr Ashley Tan fa azo atao ny fanatsarana ny fiarovana ny solosaina tsy mila mandràra ny aterineto ao amin'ny biraom-panjakana:
Mety ho tsy nandray ny zava-misy ireo tokony ho manampahefana fa rafitra sosialy sy teknika ny aterineto. Ity fanakombonam-bava ity dia fikasana hampihenana ny fitondran-tena adalan'ny olombelona eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny vaovao tafaporitsaka amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny lafiny ara-teknika. Mbola ahafahan'ny olona tsy manam-pahalalana hiditra amin'ny solosaina (terminal) voafetra isa sy amin'ny fitaovana “marani-tsaina” azy ireo manokana izany.
Zava-dehibe eo amin'ny toeram-piasana maoderina ny fiarovana ny solosaina, saingy tsy tokony ho fialan-tsiny hiverenana amin'ny fomba fanao adala sy ankamehana izany. Ny olona kasain'ny politikam-piarovana haraha-maso indrindra anefa dia ireo olona mila ampahafantarina sy beazina.
Nilaza ilay mpahay momba ny teknolojiam-baovao Zit Seng fa mety hahomby kokoa ny fanomezana fampiofanana momba ny fiarovana noho ny fanapahana ny aterineton'ny mpiasam-panjakana :
Vanim-potoanan'ny aterineto ankehitriny. Na dia miezaka mafy hanakana ny aterineto aza ianao, hahita lalana foana ny olona. Tsy mino aho fa hahomby ny zavatra ataon'ny governemanta .
Nieritreritra manokana ny tenako fa ny fanabeazana no mety hahomby kokoa, na, fara faharatsiny, mendrika andramana. Raha tsy hoe fa nandramana izany ka nandamoka.
Mihevitra ilay mpisera Facebook Bilahari Kausikan fa diso ny mamaritra ny tolo-kevitra ho fandraràna ny aterineto satria “ny hany hotapahana dia ny rafi-pifandraisana anatin'ny fitondram-panjakana ary mbola hanana fidirana misaraka amin'ny aterineto ireo manampahefam-panjakana.”
Ho azy kosa, nanome toky ho an'ny vahoaka ny IDA fa tsy manala tanteraka ny fidirana amin'ny aterineto eny amin'ny biraom-panjakana sy ny sampan-draharaham-panjakana izany, indrindra fa tsy hiharan'izany ny fifanakalozana an-tserasera. Mba hampitoniana ny tahotry ny vahoaka sy hanitsiana ny hevi-diso momba ny soso-kevitra, namoaka ity sary torohay ity ny IDA :